Maxay ka wada-hadleen Siciid Deni & Odayaasha gobalka Nugaal ? – Puntlandtimes Hoyga Wararka Somalia
Maxay ka wada-hadleen Siciid Deni & Odayaasha gobalka Nugaal ?
June 21, 2022 Xuseen 4
Madaxweynaha Puntland, Siciid Cabdullaahi Deni ayaa xalay ku qaabilay Madaxtooyada caasimadda Garoowe qaar kamid ah Nabaddoonada iyo Odayaasha gobalka Nugaal.
Kulanka oo ahaa mid xasaasi ah ayaa looga hadlay dhowr arrimood, kuwaas oo kala ah ‘Difaaca Puntland, ka hortaga colaad kale oo ka dhacda deegaannada Sange-Jebiye iyo Saaxmeygaag, iyo xalinta khilaafka Madaxweynaha iyo Madaxweyne kuxigeenka Puntland’.
Odayaasha gobalka Nugaal ayaa la wadaagay Madaxweynaha, sida ay uga walaacsan yihiin qorshaha Somaliland ee hurinta colaada Sange-Jebiye iyo Saaxmeygaag, iyadoo duulaan kusoo ah qabshashada deegaano kamid ah Puntland.
Mid kamid ah odayaasha la kulmay Siciid Deni, ayaa sheegay in Madaxweynuhu uu u sheegay inay Dowladdu si dhow ula socoto dhaqdhaqaaqa Somaliland, ayna diyaarisay qorshe looga hortagayo, balse uusan la wadaagin nooca uu yahay.
Sidoo kale, Madaxweyne Deni ayaa u sheegay odayaasha la kulmay inay dowladdu diyaar la tahay wixii uga soo aaday xalinta colaada Sange-Jebiye iyo Saaxmeygaag. Waxaana uu intaas ku daray in xalinta khilaafka ka dhexeeya isaga iyo Axmed Karaash uu meel gabo-gabo ah marayo.
Ma Ciise riyoole ayaaba sidaa u hadlaya oo aanu lahayn waa debris?
Markaad dhulka Dhulbahante damaacideen,ciidanka maamulkana u adeegsateen nabad bay Somaliland ugu baaqday labada dhinacba iyadoo la moodayay dagaal beeleed,waxase aad keenteen inaad Jamhuuriyadda ka been sheegtaan!!!
Sidaad u dhigaysaan bay noqon,qarankuna wuu difaaci muwaadiniintiisa & dhulka qaranka,waxana la gaadhayaa xuduudaha qaranka,waana la sugayaa.
-Waxa la hubaynaaa muwaadiniinta weerarka lagu yahay ee wax ka gurta kkkkk
Dhulbahante oo maxaabiis ahaan idiin wada waad arki doontaan 👍😂😂😂😂
kkk waxay kawada hadleen odayaasha ayaa u tacsiyeeyay dharbaaxadii uu kala kulmay doorashada madaxweynaha iyo raadiintii raisalwasaareha iyo uu mardambe hawiye aaminin madaama ay soo furteen iyo inuu xamza bare la shaqeeyo si uu san daarood u kala tagin si uu jaanis soomaliland u helin si ay u qabsato bariga sanaag ileen waa meesha hada ay ku taamayaan sanadka u dhiman uu putland u shaqeeyo badbaadinteeda iyo isku keenidooda Kkk
Dhiilo kiciye says:
Demiyow xaniinyaha beele Karaash la heshii arintu meel xun bay maraysaye oo dhuulaan baa lanagu yahaye kkkk
Deni: sabab maxaa idinka khilaafka idinka jira?
Odayaashii: Karaash ayaa la hadlaya odayaasha Dhulbahante saas ma fahmaysid kkkkk
Deni:Waan cabsanaynaa miyaad leedihiin?
Cabsi maxay tahay seed u hadli?
Deni: idinku ma dhul Sool ah baad rabtaan mise Nugaal baa laydinku yimi?
Odayaashii Ciise M: Sool waan degnaa!!!
Almaydaan waasac qoryaha ha ka cararina sidii waagii GAAS.
Xogta waa la hayaa keentay in MS Maxamuud khiyaamo degdeg Karaash ula heshiinayaan.
Sayid Khaalid says:
Walaalayaal Majeerteen qaata shareecada Islaamka si aad uga baxdaan dhibaatada ay idin kuhayaa qabiilada ila degan ee Isaaq iyo Dhulbahante.
Haddaad qaadataan xariga Allah waxaad heleysaan amni ,horumar adduun iyo aakhiro janno .
Dhulkaan aad isku heysataan waad Ka haxeysaan oo dhulka waa dhulka Allah .